ဖျံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Otter ဟုခေါ်သည့် “ဖျံ” အကြောင်း ဖြစ်သည်။ အခြား အသုံးအနှုန်းများ အတွက် ဖျံ (သံတူကြောင်းကွဲ) ကို ကြည့်ပါ။
Temporal range: Miocene အလယ်ခေတ် မှ ယနေ့ခေတ်
ဝစ်ရှင်နရီ၊ အခမဲ့အဘိဓာန်တွင် ဖျံ ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
ဖျံ (Otter) သည် သားစားနို့တိုက်သတ္တဝါများဖြစ်ကြပြီး "လူထရီနာ (Lutrinae)" မျိုးရင်းခွဲမှ ဖြစ်သည်။ ရှင်သန်ဆဲ ဖျံမျိုးစိတ် (၁၃) မျိုးရှိပြီး၊ အများစုမှာ ငါးများနှင့် ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများကို အခြေခံစားသုံးသော သားရဲတိရစ္ဆာန်များဖြစ်ကြသည်။ ဖျံ မျိုးစိတ်အများစုသည် ကုန်းတပိုင်း/ရေတပိုင်းနေ (ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါနှင့်မရောထွေးပါနှင့်)၊ ရေချို (သို့) အဏ္ဏဝါ တိရစ္ဆာန်များဖြစ်ကြသည်။ ဤ ဖျံ (လူထရီဒီး) မျိုးရင်းခွဲသည် ဝီဆယ်များ၊ ခွေးတူဝက်တူများ၊ mink နှင့် wolverines အစရှိသော မျိုးရင်းခွဲများနှင့်အတူ မျိုးရင်း မက်စတီလီဒီး ထဲတွင်ပါဝင်သည်။
↑ "Multigene phylogeny of the Mustelidae: Resolving relationships, tempo and biogeographic history ofamammalian adaptive radiation" (2008). BMC Biol. 6: 4–5. doi:10.1186/1741-7007-6-10. PMID 18275614.
↑ "Enhydriodon dikikae, sp. nov. (Carnivora: Mammalia),agigantic otter from the Pliocene of Dikika, Lower Awash, Ethiopia" (2011). Journal of Vertebrate Paleontology 31 (2): 447–453. doi:10.1080/02724634.2011.550356.
↑ Switek၊ Brian။ "The Bear Otter"။ Wired။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖျံ&oldid=716345" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။